Fandaharan’asa PROSPERER Boeny: tosika ho an’ny hoavin’ny tanoran’ny Faritra | Région Boeny
Mpianatra zato mahery izay notohanan’ny fandaharan’asa PROSPERER no navoaka ny Zoma 19 Desambra 2014 tao amin’ny Tranoben’ny Varotra sy ny Indostria eto Mahajanga.
Tafiditra ao anatin’ny tetik’asan’ny Ministeran’ny Fambolena sy Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra ny fampiofanana ireo mpianatra ireo, izay natao indrindra hitsinjovana ireo tanora izay osa sy tra-pahasahiranana eo amin’ny lafiny fianarana. Ny fanjakana Malagasy no tompon’ny famatsiana ara-bola sy ara-teknika rehetra ka ireo sehatra tsy miankina miompana amin’ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra no tena tohanana amin’izany.
MIOITRA no anaran’ity andiany voalohany ity izay vonona avy hatrany hiditra eo amin’ny sehatry ny asa. araka ny voalazan’Atoa PAULIN, mpandrindram-paritry ny PROSPERER Boeny. Avy amina distrika telo ireto mpiofana ireto dia Mahajanga I, Ampitolova-Mahajanga II, ary Amboromalandy-Marovoay.
Nandritra ny enim-bolana naharetan’ny fiofanana, dia samy niparitaka, araka izay safidiny, tamin’ny sehatra maro izay misy eto Mahajanga izy ireo toy ny rary, ny fanamboarana mofomamy, ary ny zaitra. Ankilan’izay ny fandahar’asa PROSPERER dia nanamafy ny fiofanana ara-teknika sy fianarana asa.
Tsy mijanona eo amin’ny lafiny fampiofanana fotsiny ihany nefa ny fandaharan’asa fa nanohana ihany koa ireo tanora ireo tamin’ny ny fitadiavana asa sy ny famoronana asa. Nisy araka izany fizarana fitaovana hoan’ireo izay tonga dia efa vonona hanao asa-tena nandritra io famoahana andianay io.
Rtoa Ratsimbazafy Hanitra, avy ao amin’ny Sampandraharam-paritry ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra eto Boeny no nisolo-tena ny Ministera mpiahy, notron’ireo manampahefana avy eto an-toerana notarihin’ny solotenan’ny Lehiben’ny Faritra, Atoa Soavindrazana Eloi.
Nanamafy ity farany fa tosika lehibe ho an’ny Faritra ny fisian’ity fandaharan’asa ity ka mitaky fiaraha-miasa eo amin’ny hery velona rehetra mba ahafahana mijery bebe kokoa ny hoavin’ny tanora ato anatin’ny Faritra Boeny. Notsindriany fa misokatra ny ho avin’ireto vao nivoaka ireto satria tonga dia afaka miatrika asa avy hatrany. Ary manana tombon-dahiny ireo hiasa-tena izay vao novatsian’ny PROSPERER fitaovana.